Ntanye 10% na drones na ngwa maka Black Friday | Akụkọ akụrụngwa
Ntanye 10% na drones na ngwa maka Black Friday
Enwere ọtụtụ drones n'ahịa, Otú ọ dị, ọ bụrụ na anyị achọ ụdị ndị dị mma na nkwụsị ụgbọ elu, nke na-adịghị agbaji na mgbanwe mbụ, na ikuku nke ikuku na-ebibi ụgbọala anyị, na anyị nwere ngwa mgbe niile ... ndepụta nke ụdị dị ntakịrị belata.
Ma ọ bụrụ na anyị chọkwara drones ndị na-eguzogide mmiri, anyị nwere ike belata ndepụta drones na otu onye na-emepụta ya: SwellPro. Onye nrụpụta a gbadoro ngwaahịa ya nye ndị ọrụ ahụ niile chọrọ igwe dị elu nke na-enweghịkwa mmiri. Usọrọ Black Friday, Isi ihe na-enye anyị mbelata ego 10% na drones ya niile na ngwa n'oge November 29 na 30.
Ndepụta nke SmellPro nwere ụdị abụọ, ụdị mmiri na-eguzogide mmiri, mana nwere njirimara na uru dị iche iche na nke ahaziri iche iji rụọ ihe ndekọ banyere oké osimiri, ọrụ ọchụchọ na nnapụta yana ịkụ azụ.
2 Ogwu +
Ihe omuma a diri ndi okacha amara, obughi nani n'ihi na o na enye anyi a nnwere onwe nke ruru 25 nkeji, ma n'ihi na ọ na-enyekwa anyị ohere ịgbakwunye 3-axis gimbal na igwefoto nke Sony mepụtara nke anyị nwere ike ịdekọ vidiyo na 4k quality na 30 fps ma were foto ruo 16 mpx.
Ọ na - agụnye ọrụ ga - enyere gị aka ịlaghachi na mbido na akpaghị aka yana nke ọzọ na - enye anyị ohere - hazie oge ụgbọ elu nke mere na n'oge njem gị ị gara ileta ihe dị iche iche, ihe a niile ga-ekwe omume site na GPS wuru.
Emere ihe nlere a maka ndi choro inweta obi uto na onodu obula adịghị mkpa mgbakwunye ebe ọ bụ na ọ na - ejikọ igwefoto, nke Sony mepụtara nke anyị nwere ike ịdekọ vidiyo na ogo 4k na 30 fps ma were foto ruo 12 mpx.
Ma obughi nani mmiri nke onwe ya ka mmiri na-egbochi mmiri, mana o bukwa ihe di anya, ya mere ihe nlere a ezigbo maka ndekọ ebe mmiri dị oke. Ihe nlere a tinyekwara oru nke n’enye gi aka ịlaghachi na ọnọdụ anyị na akpaghị aka.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ụdị ndị ọzọ ma nwee ọnụego 10% maka Black Friday, egbula oge ileta weebụsaịtị ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ntanye 10% na drones na ngwa maka Black Friday
Ihe kacha mma Black Friday 2019 na-emekọ na Amazon
Ngwongwo akụrụngwa ụlọ kachasị mma na Black Friday